Jim Whitehurst pamusoro pekuti open source inowedzera sei mikana yedu | Linux Vakapindwa muropa
Pamusangano weRed Hat, iyo Red Hat CEO Jim Whitehurst Akataura pamusoro pekuti open source inowedzera sei mikana yedu. Kune akawanda akavhurwa sosi mapurojekiti uye isu tese tinoziva mabhenefiti avo uye nekuvandudza kwavanounza kuhupenyu hwedu uye ndizvo zvakaunzwa naJim kuona:
«Zvinonakidza kuona kuti nyika iri kuramba ichichinja zvakatikomberedza. Uye zvinoita sekunge shanduko dziri kuitika nekukurumidza kupfuura nakare kose. Yedu Red Hat Summit "Rava rudzi rwemaforamu kwandinogona kubaya bhatani rekumbomira ndotarisa kure kwatasvika uye nekwatiri kuda kuenda."
«Paunenge uchiongorora misoro yandakabata nayo mumakore apfuuraZvino ini ndoona maitiro atanga tichiteedzera shanduko munzira iyo vanhu vanoshanda nayo. Makore matatu apfuura, semuenzaniso, ndakataura nezve simba rekutora chikamu: sei vanhu vanoshanda sechikwata munzira yakavhurika uye yakajeka vari kugona zvakanyanya kana zvasvika pakugadzirisa matambudziko. Zvino makore maviri apfuura, ndakatarisa pamabatiro emunhu, kutora chikamu pachena senge mutambo unoshanda apo vanhu vanofanirwa kutora danho. Uye gore rapfuura, ndakagovana maonero angu ekuti isu tinofanirwa kufunga mashandiro atinoita munguva yekuvhiringidzika.".
«Kubva pane yangu yazvino maonero, ndiri kushamisika kuti ngativei pamucheto weimwe shanduko inokanganisaIni ndaizodaidza kuti 'kufamba' kubva ikozvino zvichienda mberi, izvo zvinozovhura ese marudzi ese mikana kuti nzanga yedu ikure nekushanduka mune ramangwana. Asi kuti tinzwisise mhando yemhedzisiro inozoitwa neshanduko iyi, isu tinofanirwa kutanga tatarisa kumashure kuti tione kuti vanhu vaimboshanda nekugara zvakasiyana zvakanyanya sezvatiri kuita nhasi. Haisi nguva yekutanga kuti shanduko munzira yatinofunga uye nebasa yatungamira mukuputika kwekufambira mberi.".
Jim akanyanya kutarisisa akasiyana mapoinzi izvo zvinosimbisa izvi:
1 Fungisisa miganhu yedu:
2 Iko kukanganisa kune nyika yakatikomberedza:
3 Sangano rekushandura:
Fungisisa miganhu yedu:
“Hafu yemireniyamu yapfuura, tisati tadavira musainzi nekufunga zvine musoro uye mukuita - shanduko yesainzi isati yavapo - hatina kubvumidzwa kubvunza mibvunzo kana kuita nharo kuti nyika yairevei uye kuti yakazvibata sei.
Ipapo kwakatanga shanduko huru munzira yatakawana nayo ruzivo rwepasi rakatipoteredza. Iyo Scientific Method yakabuda, nekuda kwevanhu vane kuda kuziva kwaisagona kuwanikwa. Mapiyona akashinga saGalileo, uyo akapokana nezvaakange audzwa nezvaaigona kuona mudenga usiku, kunyangwe kana kusahadzika uku kwakatungamira kujeri kana kunyangwe rufu, akatanga kubvunza nyika yakavapoteredza.
Kuwanda kwevanhu vachibvunza zvavakaona, zvaive nani uye zvakadzika mibvunzo yavo ikava. Nekuda kweizvozvo, takabva munyika mataitenda izvo zviremera zvepamusoro zvakatiudza kune nyika mune mhedzisiro yaive yakavakirwa pakucherekedza uye kuyedza. Sokutaura kwakaita Sir Francis Bacon, avo vanowanzonzi ndivo baba veScientific Method, vakanyatso kutaura nenzira iyi: “Kana munhu akatanga aine chokwadi, anoguma nekukahadzika. Asi kana isu tichida kutanga nekusahadzika, tinogona kupedzisira tiine chokwadi".
Pamwoyo weScientific Method ndiko kusagutsikana kwekuda kuziva nezve nyika yakatikomberedza. Iyo nzira yekubvunza kuti sei zvinhu zvichishanda nenzira yavanoita, uyezve nekudzidza kuburikidza nekuyedza uye kuyedza uye kukanganisa. Iko shanduko kubva pakubvisa kune inokanganisa kufunga, kubva kumusoro-pasi kufunga kune pasi-kumusoro kufunga. Izvo ndezve rusununguko rwekutsvaga izvo zvingave zvichibvira, kupfuura miganho iyo chero chiremera chepamusoro chingayedza kumanikidza.
Iko kukanganisa kune nyika yakatikomberedza:
Kugamuchira iyi mhando yedzidziso nzira kwakachinja nzira yatainzwisisa nayo zvese zvatakaita uye zvatakaona. Uye zvakashandura nzira yedu yekufunga, nzira yekufunga yakasimudzira mafambiro matsva akagadzira nyika yemazuva ano.
Patakaona kuti Nyika yakanga isiri pakati pezvinhu zvese, takapinda Mufananidzo, iyo yakaunza mazano matsva senge rusununguko rwemunhu, hurumende yebumbiro, uye kushivirira chitendero. Kutsunga kutsva kwevagadziri veakakosha matekinoroji senge injini yemhepo, telegraph uye nzira yeBessemer yekugadzirwa kwesimbi yakatitungamira Industrial Revolution. Kudzidza anatomical dzidziso - kubva kuhutachiona dzidziso kusvika kumhando yepamusoro dzekuvhiya - yakaburitsa a Chiremba Revolution Yakashandura kunzwisisa kwedu kwakakosha kwezvirwere nemiviri yedu.
Kufambira mberi uku kwese kwaive kukonzeresa kwekudzidza kwakaitika nekutenda kumibvunzo yairamba ichibvunzwa uye neavo vakaedza kuwana mhinduro.
Iyo sainzi yekutsvaga inoenderera nhasi, kunyangwe munyika yesoftware open source. Iwo misimboti yekuda kuziva, kubatana, meritocracy, uye kuzvimiririra ndiyo hwaro hwesimba rezvekuita uye yakavhurika sosi maitiro. Isu tinoziva izvi nekuti isu tinorarama nemitemo iyoyo zuva rega rega randinopinda tsika nemagarirokune zvemukati kubva kuRed Hat. Uye ndosaka tichigona kukudziridza dhizaini yemazuva ano iri kuvhura mukana wevanogadzira uye mabhizinesi kuti varambe vachikura munguva ino yeshanduko.
Uye sekuBacon nevanhu venguva yake, hatifambi nemugwagwa uyu tiri toga. Zviuru zvemapiyona akavhurika sosi nenzanga vakasundira sosi yakavhurika kupfuura miganho inofungidzirwa.
Vhura sosi yave kungopfuura nzira chete yekugadzira software. Yakave uzivi, seti yezvitendero. Vhura sosi, uye yakavhurwa sosi maitiro, auya kuzoreva kufunga kupfuura miganho uye kuongorora nyika yemikana isingaperi.
Nekugamuchira iyo yakavhurika sosi maitiro, yedu nharaunda yakabatsira kushandura matekinoroji seLinux kuita kuti hupenyu huve nyore. Nharaunda yedu yachinjawo "hunyanzvi hwevanhu," ndiko kuti, matauriro atinoita nekugadzirisa matambudziko pamwechete. Vhura sosi rave rave rinotevera wave rekuti isu tinogadzira sei kwechokwadi matsva ane maitiro.
Nekuwedzera, vanhu vazhinji vanoziva kuti yakavhurwa sosi inopa nzira iri nani yekushanda. Vhura sosi senge tekinoroji yevanhu iri kupinda mune zvakajairwa Mabhizinesi, hurumende, nemasangano asiri epasi rese ari kuzvitambira.
Ini ndinotenda icho chakavhurwa sosi chakapinda munguva nyowani uye yave kuita inoshandura kufamba. Parizvino pane vanhu vazhinji vari kubvunza mibvunzo seiyi: Isu tinofungidzira sei uye nekuona kugona uko iko tekinoroji iyi kwaakatigadzirira? Tinoita sei semunhu mumwe nemumwe? Uye seboka? Uye sekambani uye, pakupedzisira, senzanga.
Hatisati taziva mhinduro dzemibvunzo iyi yese, asi nekuyedza pamwe nekubatana ticharamba tichienda kwadziri. Chete nekuenderera mberi kubvunza mibvunzo ndipo patinogona kuramba tichiwedzera mikana yedu nhasi, mangwana, uye mune ramangwana.
Ndinokukoka kuti ubatane nesu uye utange kurota muhombe uye zvibvunze iwe, pamwe nesu, zvatingaite zvinotevera pamwe chete ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Jim Whitehurst pamusoro pekuti open source inowedzera sei mikana yedu
KDE Partition Manager, iyo KDE chikamu mupepeti inouya neshanduro itsva 4.0